Fiangonana sy ny Fikambanana Krisitiana Hanatanteraka ny “Voa tsara miendrika ny fibebahana”
Nampahafantarina tetsy amin’ny Sekoly ESM tetsy Ampandrana omaly ny hetsika Voa tsara miendrika fibebahana. Antso ho amin’ny fibebahana ka iarahana amin’ny Fiangonana sy ny Fikambanana Kristiana samihafa.
Fiatrehana ny Paska Hahazo fanampiana ireo sahirana eny Ambohidrapeto
Hizara fanampiana ho an’ireo olona sahirana ara-pivelomana ao aminy ny kaominina Ambohidrapeto, tarihin’ny Ben’ny tanana Mihary Andriantsilavo amin’ity herinandro ity mialohan’ny hankalazana ny fetin’ny Paska.
FFKM « Aza kivy fa tsy maintsy handresy isika”
Nandefa hafatra mafonja ho an’ny Kristiana sy ny vahoaka Malagasy ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) omaly nandritra ny fanompoam-pivavahana natao teny amin’ny Fjkm Katedraly Analakely
Fiangonana Loterana Malagasy Hamatsy fiarovana sy fanampin-tsakafo
Nanao fanambarana tetsy amin’ny foiben’ny sampana Loterana misahana ny fahasalamana na SALFA Andohalo omaly ny avy eo anivon’ny Fiangonana
FFKM Miantso fibebaham-pirenena
Omaly alahady 29 martsa dia nisy fanompoam-pivavahana notarihin'ny fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara na ny FFKM tao amin` ny fiangonana EEM Ambohimanoro.
Filohan’ny FJKM Miantso ny vahoaka hivavaka isan’ora
Manoloana izao areti-mandringana tafiditra eto anivon’ny tanin’ny repoblikan’i Madagasikara izao dia manao antso avo amin’ny vahoaka malagasy rehetra,
Chandoutis Raoera “Mila miverina amin’Andriamanitra isika.”
Manoloana ny toe-draharaham-pirenena izay iombonany amin’izao tontolo izao dia namoaka fanambarana ny avy eo anivon’ny fikambanana zon’olombelona mampandroso vahoaka sy ny fikambanana zon’olombelona mijoro,
Tsy nety kosa ny fandrindrana ara-politika. Maro ireo antoko politika tsy nahazo toerana toy ny GFFM izay nomarihiny manokana fa tsy tafiditra ao anaty governemanta na dia nandefa antontan-taratasy tany amin’ny mpitondra aza nandritra ny fikarohana ireo tena atidoha. Ankoatra izay dia anisan’ny lesoka ary tokony ho natao mangarahara ihany koa ny mikasika ireo mpikambana teo anivon’ny governemanta nalana sy ireo mbola notazonina. Izany no tena fahamarinana, hoy hatrany ity pastera ity. Nilaza ny heviny ihany koa izy mikasika ny fitakiana ny îles eparses. Nomarihiny manokana fa raha tena tia tanindrazana ny mpanao politika dia miantso sy mitaona ny vahoaka isan-kerinandro mba hilanja sorabaventy sy hanao fihetsiketsehana manoloana ny masoivohon’i Frantsay eto amintsika. Tsy midika ho fanonganam-panjakana mihitsy izany raha araka ny fanazavany saingy manamafy ny zo hananan’ny Malagasy ny maha tompony azy ireo ny îles éparses mba ho hitan’ny firenena maneran-tany. Nisy ny fotoam-pivavahana notarihin’ity filoha mpanorina ny fiangonana Apokalipsy ity teny Antsahamanitra ny faran’ny herinandro teo ka niarahaban’ireo mpino avy ao amin’ny distrika Atsinanana azy mivady noho ny fahatongavan’ny taona vaovao 2020.
Marigny A sy Patricia R.